यसरी बित्यो सन् २०१८ « Nepali Digital Newspaper
यसरी बित्यो सन् २०१८
१६ पुष २०७५, सोमबार ११:३४
सन् २०१८ आजदेखि हामीबाट बिदा हुँदै छ । यस वर्ष पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटना पनि विश्वव्यापी भए । वर्षभरिका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरूको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरू नै धेरै भएका छन् । त्यसबाहेक हिंसात्मक, आपराधिक तथा अन्य विभिन्न घटनाहरू पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन् । यस वर्षका मुख्य केही घटनाको यहाँ सङ्क्षेपमा स्मरण गरिएको छ ।
यस वर्षको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विनाशकारी घटनाको रूपमा इन्डोनेसियाको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन आएको ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने झन्डै सात सयजना अझै पनि बेपत्ता छन् । सुलावेसीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको यस भूकम्पमा परी १७ सय घाइते भएका थिए भने लाखौँको भौतिक संरचनामा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा अपेक्षितभन्दा पनि अनपेक्षित भूिमकाहरू धेरै देखाए । सञ्चारमाध्यमहरू, आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई पनि पूर्ण विश्वास कहिल्यै गरेनन् । उनले यो अवधिमा झन्डै डेढ दर्जन मन्त्री तथा मुख्य कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरे भने अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि विश्वास बढाउन सकेनन् । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँगको वार्ताबाहेक उनको प्रशंसायोग्य भूमिका कमै भएको अधिकांशको ठम्याई छ । पछिल्लो समयमा केही ठाउँमा भएको निर्वाचनको नतिजा र मेक्सिको पर्खालको बजेट पारित नभएपछि कर्मचारी तलबविहीन भएका घटनाले धक्का दिएको छ ।
युरोपेली संघसँग बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायतले त्यसको प्रक्रियालाई टुंघोमा पु¥याउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा धेरै ध्यान दिन भ्याएकी छैनन् भने ब्रेक्जिट मामिलामा दुईजना विदेश मन्त्रीसहित अन्य केही मन्त्री र वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत उनलाई साथ दिएनन् । सन् २०१६ को जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा ५२ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७४ लाख मतदाताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ४८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६१ लाख मतदाताले भने बेलायत (युरोपियन युनियन) इयूकै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मत दिएका थिए । साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि इयू छाड्ने प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने विश्वासमा नै अझै पनि अनिश्चितामा बेलायत छ ।
लामो समयदेखि एक–अर्कालाई प्रमुख दुश्मन मान्ने उत्तर कोरिया र अमेरिकाको सम्बन्धमा सन् २०१८ मा नाटकीय परिवर्तन भयो । एक अर्कालाई सिध्याउने चेतावनी दिएको केही महिनामै ती देशका नेताहरूले गत जुन १२ का दिन सिंगापुरमा भएको शिखर सम्मेलनको क्रममा एक–अर्कालाई अँगालो हालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विश्व समुदाय नै अचम्भित भएको छ । यो सम्भव बनाउने मुख्य श्रेय भने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनलाई जान्छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने र कोरियाली द्वीपलाई आणविक निशस्त्रीकरण गर्ने अभियान सन् २०१९ मा पनि जारी राख्ने प्रतिबद्धता तीनै देशबाट व्यक्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमको दोस्रो शिखर बैठक सन् २०१९ को शुरुमै गर्ने तयारी हुँदै छ भने उत्तर कोरियाली नेता किमले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने योजना छ ।
जर्मनीको सत्तारुढ दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीमा १८ वर्षदेखि एकछत्र नेतृत्व गरेकी चान्सलर एन्जेला मर्केलले यस वर्ष पार्टी नेतृत्वबाट बिदा लिएकी छिन् । यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइएको छ । मर्केलले चान्सलरका लागि आफूले चौथो कार्यकालको अन्त्यपछि उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिसकेकी छिन् । उहाँको चौथो कार्यकाल आगामी सन् २०२१ मा सकिँदै छ ।
रुसको राष्ट्रपतिका रूपमा भ्लादिमिर पुटिन यस वर्ष चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु अर्को चर्चाको विषय बन्यो । गत मार्च १८ मा भएको निर्वाचनबाट उनी अर्को ६ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका हुन् । रुसमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेकाले पुटिन विगत १८ वर्षदेखि रुसमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा रहेका छन् । अहिले ६५ वर्ष पुगेका पुटिनको यो कार्यकाल सन् २०२४ सम्मको जोड्दा उनको शासन २५ वर्षको हुनेछ ।
पत्रकार खसोग्जीको हत्या
साउदी अरबका पत्रकार जमाल खसोग्जीको गत अक्टोबर २ मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित महावाणिज्य दूतावास भएको हत्याको विषय लामो समयसम्म विश्वव्यापी चर्चामा रह्यो । दशकौँसम्म साउदी राजपरिवारको सल्लाहकार भएका, तर पछि सम्बन्ध बिग्रेपछि अमेरिका बस्दै आएका खसोग्जीले अमेरिकी पत्रिका द वासिङ्टन पोस्टमार्फत साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानका नीतिहरूको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
सिरियामा तैनाथ दुई हजार अमेरिकी सेनालाई इस्लामिक स्टेटविरुद्धको युद्ध समाप्त भएको भन्दै डिसेम्बर १९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेना फिर्ता लैजाने घोषणा गरे । तर, इराक र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाको फिर्ती कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
विश्वकप फुटबलको २१औँ संस्करण
२१औँ संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्यो । फ्रान्सले दोस्रोपटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो । फ्रान्सले सुनको ट्रफीसँगै रु. चार अर्ब १० करोड पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । विश्वकप फुटबल २०१८ को कुल पुरस्कार राशि रु. ४३ अर्ब रहेको थियो । एक महिनासम्म चलेको प्रतियोगितामा ३२ देशका ७ सय ३६ खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी थिए । क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिक फिफा विश्वकप २०१८ को सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि झन्डै सात हप्ता राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उनको दुवै निर्णय अवैध भएको भन्दै अदालत र संसदले खारेज गरिदिएपछि अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । अवैध कदम अहिलेको संसारमा टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिनेगरी टुंगिएको यो घटना यस वर्ष दक्षिण एसियामा चर्चामा रह्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा यमनको होडेडामा हुथी विद्र्रोही र सरकारबीच डिसेम्बर १९ मा युद्धविराम भएको छ । दश हजारभन्दा बढीको मृत्यु र लाखौँ मानिस विस्थापित गराइसकेको यमन गृहयुद्धले मानवीय संकट निम्त्याएको राष्ट्रसंघको भनाइ छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी आणविक सम्झौताप्रति इरानी सत्ता जवाफदेही नरहेको भन्दै मे ८ मा फिर्ता हुने तथा इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरे । अमेरिकाले प्यालेस्टिनीको विरोधका बाबजुद मे १४ मा इजरायलमा रहेको राजदूतावास जेरुसेलममा स्थानान्तरण गरेको थियो ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन, मि–टु अभियान, अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान आदिमा जारी द्वन्द्व, पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई छोरीसहित जेलमा राखिएको छ भने विश्वविश्यात क्रिकेट खेलाडी इमरान खानले सत्तारोहण गरेका छन् । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले ९२ वर्षको उमेरमा फेरि देशको नेतृत्व सम्हालेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक भ्रष्टाचारको आरोपमा कारावासमा रहेका छन् । बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई चौथोपटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा उनकी चिरप्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाले ७३ वर्षको उमेरमा अस्वस्थ अवस्थामा जेलभित्रै छटपटारहनुपरेको छ । यस्तै उतारचढावबीच वर्ष २०१८ को बिदाइ र नयाँ वर्ष २०१९ को स्वागत गरिएको छ । नयाँ वर्षलाई स्वागत, सबैलाई शुभकामना ।
फ्रान्समा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या झन् बढेको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा कोभिडका संक्रमितहरु झनै
हे भगवान हरघरमा मेरो जस्तै दाजु देउ
■ प्रमिला पान्डे दशैँले छपक्कै छोप्योको थियो गाउँलाई । जमरा राखिसकियो । केही दिनमै फूलपाती, अष्टमी, नवमी, दशमी गन्दागन्दै पूर्णिमा
त्यसरी मनाइन्थ्यो दशैँ र पो दसैँ माने झैँ हुन्थ्यो !
■ तिलक पौडेल शरद ऋतु जब आयो, वृष्टिले छुट्टि पायोस गगन झलमलायो, मेघ माला बिलायो ।।जल बिमल गरायो, गैर हिलो
कोरोनाका कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ३० हजार विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या चार करोड २९ लाख नाघेको
यसपालिको बडा दशैं घरभित्रै !